Shirkadda Baabuurta ee Ford waxay BorgWarner ku sharftaa Abaalmarinta Heerka Sare ee Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Shirkadda Baabuurta ee Ford waxay BorgWarner ku sharftaa Abaalmarinta Heerka Sare ee Adduunka
BorgWarner, oo ah hoggaamiye badeecad caalami ah oo soo bandhigaya xalal dhaqdhaqaaq oo hal-abuurnimo leh oo waara oo loogu talagalay suuqa baabuurta, ayaa loo aqoonsaday inuu yahay alaab-qeybiye caalami ah oo heer sare ah Abaalmarinta Heerka Sare ee Ford ee 23-aad. BorgWarner ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay Ku-guuleystaha Alaabada-lahaanshaha Alaabada maanta munaasabadda dalwaddii ee Ford Motor Company.
BorgWarner, oo ah hoggaamiye badeecad caalami ah oo soo bandhigaya xalal dhaqdhaqaaq oo hal-abuurnimo leh oo waara oo loogu talagalay suuqa baabuurta, ayaa loo aqoonsaday inuu yahay alaab-qeybiye caalami ah oo heer sare ah 23rd abaalmarinta sanadlaha ah ee Ford World Excellence Awards. BorgWarner ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay Ku-guuleystaha Alaabada-lahaanshaha Alaabada maanta munaasabadda dalwaddii ee Ford Motor Company.
Frédéric Lissalde, madaxweynaha iyo maamulaha, BorgWarner Inc. "Waxaa sharaf noo ah inaan ka helno Abaalmarintan Heerka Sare ee Abaalmarinta Battery Electric Vehicle Integrated Drive Module oo ka yimid macaamiisheena muddada dheer Ford," ayuu yiri Frédéric Lissalde, madaxweynaha iyo maamulaha, BorgWarner Inc. wuxuu xaqiijinayaa hubinta teknolojiyadeenna nadiifta ah oo hufan inay yihiin kuwa ugu tayada sarreeya oo buuxiya baahiyaha dhaqdhaqaaqa ee hadda iyo mustaqbalka.
“Abaalmarinta Heerka Sare ee Shirkadda Ford Motor waxay aqoonsataa alaab-qeybiyeyaashayada ugu wax-qabadka wanaagsan adduunka oo dhan si ay gacan uga geystaan ​​keenista qorshaha Ford+,” ayuu yiri Hau Thai-Tang, madaxa madal wax soo saarka iyo sarkaalka hawlgalka. “Alaab -qeybiyeyaasha sida BorgWarner ayaa fure u ah guusha Ford ee sii socota maadaama aan ka faa’ideysanno awooda aasaasiga ah si aan u dhisno awoodo cusub oo aan u kobcinno khibradaha macmiilka.”
Honorees waxaa loo aqoonsaday inay gaaraan heerarka ugu sarreeya ee heer sare heer caalami ee qaybaha ay ka mid yihiin:
Abaalmarinnada tiirka asaasiga ah-Ula macaamil Macaamiisha Sida Qoyska, U Jeedso Hawlgallada Baabuurta oo u Tartama Sida Caqabadle, Abuur Waa inaad Alaab Haysataa
Abaalmarinta kala -duwanaanshaha iyo ka -mid -noqoshada alaab -qeybiyeyaasha oo ku wanaagsan isku -darka kala -duwanaanshaha ururkooda iyo hannaankooda ganacsi
Abaalmarinta waaritaanka ee alaab -qeybiyeyaasha hagaajiya jawiga ganacsiga
Abaalmarinta Tayada Dahabka iyo Qalinka ee goobaha wax -soo -saarka alaab -qeybiyeyaasha oo muujinaya tayo sare leh, gaarsiinta iyo waxqabadka qiimaha sanadka oo dhan